samedi, 14 mars 2020 12:00
Herisetra: Nanamparan’ny rainy ny hatezerany i Christolin, zaza 6 taona
Tranga mahaontsa no niseho teto Mahadera Fokontany Soavinandriana Kaominina ambonivohitra Sambava ny atoandron’ny Alarobia 11 martsa 2020 teo. Telo mianadahy izy ireo no zanaky ny Ray aman-dreniny ka i Christolin, 6 taona, no zokiny indrindra. Tsy tratrany tao an-trano, fa variana nandeha nilalao tany amin'ny rahalahin-drainy i Christolin tamin'ny fotoana nahatongan’i Tombo, rainy, avy tany an-tsaha, nefa ity farany ity efa namepetra fa « andrasana tsara ny zandrinao ». Tsy mifanalavitra anefa ny misy azy ireo sy ny toerana nilalaovany fa tezitra ka nikaravasy azy tamin'ny tadin’omby ny rainy ka ahiana hamela takaitra amin’i Christolin ny vono natao azy, izy izay tena mbola zaza marofy ara-batana.
samedi, 14 mars 2020 10:47
Famerenana ny fandriampahalemana: Vakin’ny Tafika ny faritra Andriry - Betroka
“Hohamoraina ny fidirana sy ny fivezivezen’ny mponina ao amin’ny tananan’i Fenoarivo, Kaominina ambanivohitr’i Begogo, Distrikan’Iakora, Faritra Ihorombe, sy ny tananan’Andriry, ao amin’ny Distrikan’i Betroka, Faritra Anôsy, ary hojerena manokana ny hitsinjovana ireo tanora voasariky ny asan-dahalo any an-toerana”. Izay no mandravona ny anton-dian’ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, niarahany tamin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta voakasiky ny resaka fandriampahalemana, dia ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, tany an-toerana.
Vokatry ny fandehanana mafy no voalaza fa niteraka loza. Fiara Hyundai 4X4 Terracan iray no nitrongy kamiao avy ao aoriana. Lehilahy iray sendra teo ivelan’ilay kamiao, no tery teo anelanelan’ireo fiara roa, ary maty tsy tra-drano. Naratra avokoa ireo olona efatra tao anatin’ilay fiara tsy mataho-dalana. Androany vao maraim-be no niseho ny loza teo Mahamasina. (Jereo Sary Tohiny)
Natomboka ofisialy androany tao amin’ny Kianja Mitafo Mahamasina-Antananarivo ny fizarana « Rakibolana » ho an’ny mpianatra hanala fanadinana (T5, T9) manerana ny Nosy nataon’ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Natao hianarana ny teny malagasy sy frantsay ny rakibolana zaraina, ary misy torolalana sy sary, dikan-teny sy tahirin-kevitra maro. Kendrena hahazo izany avokoa hatramin’ireo sekoly any ambanivohitra lavitra indrindra. Nampahafantarina ampahibemaso androany ihany koa fa ho maimaimpoana ny fampidirana mpianatra eny amin’ny EPP manomboka amin’ny taom-pianarana 2020-2021. Homena kapa ireo mpianatra amin’ny ambaratonga fototra ankoatra ny boky fianarana ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana sy ny kilasy T1.
Sary: India in Madagascar and Comoros
Tonga tao amin’ny seranantsambon’i Antsiranana ny 10 marsa 2020 teo ny sambo INS Shardul an’ny tafika an-dranomasina indiana, nitondra vary 600 taonina, fanohanana ireo traboina noho ny tondradrano niseho teto Madagasikara tamin’ny volana janoary 2020 lasa iny. Nanolotra izany tamin’ny anaran’ny governemanta indiana, ny ambasadaoron’ity firenena ity eto Madagasikara, Abhay Kumar. Nandray izany tany an-toerana tamin’ny anaran’ny fanjakana malagasy kosa ny minisitry ny raharaham-bahiny Malagasy Tehindrazanarivelo Djacoba Liva. (Jereo Sary Tohiny)
Hita androany alarobia 11 martsa 2020 tolakandro teo Tsarakofafa ny taolambalon'i Owne Alek Mohamed Rafick, ilay teratany Karana nisy naka an-keriny ny 24 jona 2014 ary efa nanomezan’ny ray aman-dreniny tambiny 40 tapitrisa Ariary ho an’izay manome vaovao hahitana azy velona. Tao amina tranona mpamily kamiao no nahitana ny taolam-balony, ary efa nalain'ny fianakaviany nanaovana ny fomba rehetra tao amin'ny Mosquée Khodja eo akaikin'ny Kianja Mitafo Soavita. Ny Zandary Fiadanana no nanao ny fanadiadiana ary nanampy azy avy eo ny sampana mpisahana ny heloka be vavaon'ny polisy Antananarivo sy ny teto Toamasina. 25 taona i Owne Alek io novonoin'ny mpaka an-keriny io, ary efa nisy olona fito voasambotra tamin'izany fa saingy afaka avokoa izy ireo nandritra ny Fitsarana tao Antananarivo ny taona 2016 na nahazo sazy mihantona roa taona sy lamandy 720 000 Ariary ny iray tamin'izany.
mardi, 10 mars 2020 22:18
Zandarimariam-pirenena: Nanao jery todika ny asa vita nandritra ny taona lasa sady manarina ny lesoka ho an’ny hoavy
Nivory tetsy Fort Duchesne – Antananarivo ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Zandarmariam-pirenena omaly sy androany. Fivoriana nasionaly izy ity anaovana jery todika ny asa vita nandritra ny taona lasa sy ibanjinana ny mbola lesoka harenina amin’ny hoavy, ary entina hanatsarana sy hanamafisana ny anjara birikin’ny Zandarimariam-pirenena eo amin’ny sehatry ny fiarovanam-pirenena anatiny sy ny fahametrahana ny fandriampahalemana. Nanambara ny Praiminisitra Ntsay Christian, izay tonga nanokatra ity fivoriana ity, omaly, fa miankina amin’ny fisian’ny filaminana sy ny fandriampahalemana, ny fahafahana miroso amin’ny zotram-papandrosoana ny firenena. Ilàna paik’ady ny fitazomana ny fahombiazana azo tao anatin’ireny “opérations” isan-karazany, izay iarahana misalahy amin’ny Tafika sy ny Polisim-pirenena ireny, nefa ny tanjona hoy ny Praiminisitra dia ny tsy hisin’ny faritra voasokajy ho mena intsony eto Madagasikara, satria izany no antoky ny fampandrosoana.
mardi, 10 mars 2020 21:53
Oniversiten’i Toliara: Nijery ifotony ny toeram-pianarana sy ny toeram-ponenan’ny mpianatra ny minisitra Assoumacou
Nidina teny amin’ny campus Maninday Rtoa Assoumacou Elia Béatrice, minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika, ny zoma 6 martsa 2020 teo nijery ifotony ny toeram-pianarana sy ny toeram-ponenan’ny mpianatra eny amin’ny Oniversiten’i Toliara. Talohan’io dia nihaona tamin’ny rantsamangaika rehetra eny anivon’ny Oniversiten’i Toliara ny minisitra. Samy naneho fahavononana amin’ny hamahana ireo olana sedrain’ny oniversite ny andaniny sy ny ankilany. Tsy nisalasala ihany koa ireto toko telo mahamasa-nahandro eto anivon’ny oniversite ireto naneho ny hetahetan’izy ireo tamin’ny minisitra mba ho fitadiavam-bahaolana amin’ireo olana sedrain’izy ireo na izany eo amin’ny lafiny fikarohana, ny fianarana, ary ny asa fandraharahana rehetra andavanandro ho fampihodinana ny oniversite. (Jereo Sary Tohiny)
Nanao fanambarana ny SEMPAMA Nosy aty amin’ny faritra SAVA androany 10 martsa 2020 miangavy ny mpanao politika mba tsy hanolo fahatany ny tompon'andraikitra amin'ny fampianarana ato amin'ny faritra na ny talen-tsekoly, na ny lehiben'ny Cisco, na ny DRENETP satria « Fotoanan'ny fanomanana fanadinana amin'izao ka sao hanimba ny fianaran'ny ankizy ny fanovana tompon'andraikitra amin'ny vanim-potoana tahaka izao ». Miombon-kevitra amin'ny mpampianatra rehetra manerana ny Nosy ihany koa ny aty amin'ny Faritra SAVA ny amin'ny fiandrasana ny vola 50 000 Ariary izay nampanantenain'ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 2018, ary efa tokony ho azo nanomboka tamin'ny volana Janoary 2020. Mitaky amin'ny fomba rehetra ny ahatongavan'io vola io amin'ny « bon de caisse » ny mpampianatra rehetra aty amin'ny Faritra, hoy hatrany ny fanambarana, izay nentin’i Christophe, filohan'ny SEMPAMA Nosy Faritra SAVA.